Ezubere iche Okporo ụzọ Ngwaọrụ Gị Mgbakwunye Ahịa Mmemme | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
$ 10.00 otu ọnwa
A 14 Afọ Mmemme Na 14 Mgbakwunye Marketing Ngwá Ọrụ Ngwọta All N'okpuru Otu ụlọ na-akwụ 60% na isslọrụ
Sonyere anyị taa
by Beverly Obere on April 15, 2021
Chọpụta Ebe Ngwaọrụ Ezubere Iji Wee Okporo ụzọ echepụtara Gị Mgbakwunye Mmemme Mmemme
09/22/2021 11:01 elekere GMT
Nnọọ! Aha m bụ Beverly Little ma nabata na blọọgụ m, "Okporo ụzọ maka mgbakwunye". Nke a zuru ezu WordPress blog bụ akụkụ nke nnukwu ngwaọrụ ị ga-enweta mgbe ị sonyere Rụọ Biz Online. Kporie isiokwu nke saịtị a, ihe eji eme njem ezubere iche maka ego yana ịme mmemme mgbakwunye mmekọ. M bi na United States ma gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Northwest (Go Cats).
Enwere m mmasị ịchọta okporo ụzọ ezubere iche…
Ọrụ mbụ m họọrọ bụ Nchịkwa Mmadụ nke m hụrụ n'anya. Ọ bụ ọrụ m ịchọta onye kwesịrị ekwesị maka otu ọrụ a kapịrị ọnụ. Ya mere, achọpụtara m mgbanwe dị n'okirikiri ịntanetị, nke chọrọ ijikọ okporo ụzọ ezubere iche ga-etinye ego n'ime mmemme azụmaahịa ziri ezi. N'ikpeazụ, enwere m mmasị ịchọta okporo ụzọ ezubere iche nke na-agbanwe. Ugbu a, m ọkara lara ezumike nká. Adị m ugbu a Amway Onye nwe ahia ahia nke onwe ya nlekọta okomoko, nri oriri, ikuku na usoro nhicha mmiri.
Enwere m Mmemme Mgbakwunye Mmemme…
Mgbe m na-asọfụ, achọpụtara m ịhụnanya maka mmemme mmemme mmekọ na -emepụta ego fọdụrụnụ. Ebumnuche m bụ iwulite alaeze ịre ahịa ịntanetị, na-elekwasị anya na steeti nka ejiri ngwa ahịa yana atụmatụ mmemme mgbakwunye.
Ọ na-atọkwa m ụtọ ikpori ndụ!
Ọ na-atọ m ụtọ ịgụ ihe, ụdị egwu dị iche iche na ikiri ihe nkiri vidio ochie. Ahuru m gi n'anya esi nri, ịzụ ahịa ejiji na sọọfụ!
Nwee ọmarịcha ụbọchị Kporie Ihe Kachasị Mma Na Ndụ
GỤRỤ AHỤ Zube fficzọ Mbata Site na Mgbasa Ozi